मर्नुअघि सञ्जुले भिडियो सेयर गर्दै फेसबुकमा यस्तो लेखेकी रहेछिन ! – Sandes Post
मर्नुअघि सञ्जुले भिडियो सेयर गर्दै फेसबुकमा यस्तो लेखेकी रहेछिन !
May 11, 2022 803
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सन्जु चौधरी मृत फेला परेकी छिन् । ललितपुरको लुभुस्थित प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा बस्दै आएकी चौधरीलाई मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा फेला पारिएको हो ।
चौधरी नेपाललाई सागमा भारात्तोलनमा स्वर्ण पदक दिलाउने पहिलो खेलाडी हुन् । २३ वर्षीय चौधरी हाल एसियाली खेलकुदको तयारीमा थिइन् । उनी एसियाली खेलकुदका लागि नेपालगञ्जबाट छनोट भएकी थिइन् । छनोटमा सहभागी १६ जनामध्येबाट चौधरी छानिएकी थिइन् ।
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा भारोत्तोलनतर्फ स्वर्णपदक विजेता सञ्जु चौधरीको मंगलबार मृत्यु भएको छ । मंगलबार बिहान करिब ६ बजे ललितपुरस्थित भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा सञ्जु झु ण्डि एको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
एसियन गेम्सको छनोटका लागि नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएकी सञ्जु प्रशिक्षक महर्जनको घरमा बसेकी थिइन् । सञ्जु महर्जनको पारिवारिक सदस्यजस्तै थिइन् । मर्नुअघि सञ्जुले आफ्नो फेसबुकमा हिन्दी टेलीसिरियलको सानो भिडियो सेयर गर्दै ’मिसिङ यु लभ’ लेखेकी थिइन् ।
Prevघट्यो सुनको मूल्य
Nextलाइसेन्स लिनेेहरुको लागि खुसीको खबर